Home Hoyga Nolosha 7 qaab oo looga hor tago cudurrada wadnaha
Caafimaadka wadnaha. PHOTO: Unsplash
Cudurrada sababa dhimashada ugu badan ee adduunka ka dhaca waxaa ugu horreeya wadne xanuunka, waxa uuna noqon karaa noocyo badan oo kala duwan.
Si ka duwan cudurro badan oo kale, waa laga hortegi karaa inta badan waxyaabaha keena xanuunnada wadnaha.
Inkastoo aadan baddali karin waxyaabaha khatarta keena qaarkood – sida xanuunno dhaxal ahaan kaaga soo raacay waalidkaaga ama xubno ka mid ah qoyska, kuwo ku yimid da’ IWM – haddana waxaa jira habab badan oo aad ku yareyn karto halista aad ugu jirto cudurrada wadnaha.
Waa inaad wax walba u sameyso si aad wadnahaaga awooddiisa u xoojiso ama ugu yaraan uga ilaaliso xanuunnada halista ah. Kuwani waa toddoba arrimood oo aad mudan tahay inaad sameyso.
1- Feejignaan joogto ah
Aqoonta ayaa wax walba saldhig u ah, muranna kama taagna. Laakiin ka warran haddii aadan aqoonin waxa u daran ama u wanaagsan xubinta ugu muhiimsan jirkaaga?
Waa muhiim in aad mar walba feejignaato, lana socoto xaaladdaada. Wax walba oo aad sameyneyso, cuntadaada iyo cabiraankaaga intaba waa in aad ka hubiso inay ku jiraan waxyaabo u daran wadnaha.
Haddii aad culeys ka dareento qaarka hore, ama meelaha ku dhow wadnaha, marnaba ha dhayalsanin. Waa nasiib darro in adigoo wadnahaaga uu halis ku jiro aadan xitaa ka war qabin.
2- Booqashada dhakhtarka
Inta badan dadku waxay dhahaan, “waligay isbitaal ma tegin anigoo caafimaad qaba”, hase yeeshee ma aha arrin sax ah.
Waa inaad dhowrkii biloodba hal mar tagtaa isbitaalka, adigoo baaritaan guud isku sameynaya, gaar ahaanna la socona caafimaadka wadnahaaga.
Dadka wax garadka ah waxay dhahaan “ka hor tagista cudurka ayaa ah daawada saxda ah”.
3- Labada cadow ee wadnaha: Sigaar iyo Tubaako
Qaar badan oo naga mid ah waxay leeyihiin balwadda sigaarka ama tubaakada, kuwo kalena waxay ka fikiraan in ay billaabaan, oo way xiiseeyaan.
Laakiin waxaa nasiib wanaag ahaan lahayd haddii uu qof walba cilmi baadhis ku sameeyo balwadda uu daneynayo kaddibna ogaado halista iyo faa’iidada uu ka dhaxli karo.
Haddii aad wadnahaaga u dadaaleyso waa inaad joojiso sigaar cabista iyo tubaakada, sababtoo ah waxay labaduba ugu horreeyaan dhibaatooyinka waxyeelleeya wadnaha.
Xitaa haddii aadan adigu sigaarka cabin, ka fogow dadka caba oo qiiqiisa kusoo gaarsiin kara.
Waxaa laga yaabaa in qofka taladan arka uu isweydiiyo sababta loo xusay, maadaama ay tahay mid ay khatarteedu iska caddahay, cid walbana og tahay. Laakiin mararka qaar xasuusinta qudheeda ayaa muhiim ah.
4- Jimicsi 30 ilaa 60 daqiiqo ah
Dhakhaatiirta iyo khubarada caafimaadku waxay si buuxda isugu raaceen in jimicsiga maalinlaha ah ee jirka loo sameeyo uu ka hor tago cudurro badan oo soo weerari lahaa wadnaha.
Jimicsigu waxa uu sidoo kale wadnaha ka difaacaa xanuunno kale oo jirka gudihiisa uga imaan kara, sida isbaddalka cadaadiska dhiigga, saliidda badan iyo cudurka sokorowga.
Haddii aadan horay jimicsi u sameyn jirin, ku billow si tartiib ah, ilaa aad ugu dambeyn kala qabsatid, awoodna u yeelatid jimicsi qaadan kara ilaa hal saac iyo wax kasii badan.
5- La socodka miisaanka jirka
Wali ma maqashay qof dhahaya, “Miisaanku wuxuu igu fuulaa si deg deg ah”?
Taasi ma aha dhab balse qofkaas wuxuu miisaanku fuulay isagoo aan fahansaneyn, sababtuna waa in uu la socon waayay isbaddalka ku yimid culeyska jirkiisa.
Sida aan wada og nahay, haddii uu cayil kaa bato waxaa cumaanaya caafimaadka wadnahaaga, halis dhimasho ayaana jireysa.
Si joogto ah ula soco miisaankaaga, si aad khatartaas u baajiso. La tasho dhakhtar si uu kuugu sheego miisaanka u qalma dhirirka jirkaaga, kaddibna cabirkaas ku dadaal.
Waxyaabaha kale ee caafimaadka wadnaha lagu xoojiyo waxaa ka mid ah cuntada oo la isku dheelli tiro, iyo khudaarta cagaaran oo aan la hilmaamin.
6- Maareynta walwalka
Nolosha adduunka kama dhammaado walwal iyo xanaaq, balse waxa muhiimka ah waa inaad barato sida loo maareeyo.
Ku dadaal inaad isdejiso marka ay kusoo wajahdo xaalad murugo leh, ama culeyso xad dhaaf ah. Haddii aad aqoonsan kari weyso arrintaas waxaa hoggaanka kuu qabanaya walwalka oo ku gaarsiinaya ilaa heer uu caafimaadka wadnahaaga halis galo.
Dadka walwalka qaba waxay mararka qaar sameeyaan wax cunid badan, taasoo u keenta cayil xad dhaaf ah, ugu dambeyntiina waxaa ku dhaca cudurrada wadnaha.
7- Hurdada habboon
Hurdada waxay kaalinta koowaad uga jirtaa waxyaabaha xoojiya caafimaadka wadnaha. Ku dadaal hurdo tayo leh. Marka hurdo tayo leh laga hadlayo micnaheedu waa in uu qofka saacado ku filan seexdo waqtiga habeenkii ah.
Hurdada habeennimada ayaa laga helaa xasiloonida dhabta ah, waana iyada midda wadnaha caafimaadkiisa u wanaagsan.
Adigoo shaqooyinkaaga, jimicsigaaga iyo mashquulkaaga kale ku jira ayaad haddana xaqiijin kartaa in hurdadaadu ay gaarto ilaa siddeed saacadood ama wax ku dhow.
Previous article5 cunto oo kalyaha u daran balse aan laga maarmin